MAITIRO EKUGADZIRISA FIREFOX KWETE KUTAMBA VHIDHIYO (2021) - NYORO
Maitiro ekugadzirisa Firefox Kwete Kutamba Mavhidhiyo
Iyo Mozilla Foundation yakagadzira Mozilla Firefox seyakavhurika-yakavhurika browser. Yakaburitswa muna2003 uye munguva pfupi yakawana mukurumbira wakakura nekuda kweinoshandisa-inoshamwaridzika interface uye huwandu hwakawanda hwekuwedzera zviripo. Zvisinei, kufarirwa kweFirefox kwakaramba pakaburitswa Google Chrome. Kubva ipapo, vese vanga vachipa makwikwi akaomarara kune mumwe nemumwe.
Firefox ichine yakavimbika fan base iyo ichiri kufarira iyi browser. Kana iwe uri mumwe wavo asi uchinzwa kunetseka nekuda kweiyo Firefox isingatambe vhidhiyo nyaya, usazvidya moyo. Simply verenga kuti uzive maitiro ekugadzirisa Firefox isingatambe mavhidhiyo.
mipumburu miviri yemunwe isingashande windows 10
Nei Firefox isingatambe mavhidhiyo kukanganisa kunoitika?
Maitiro 1: Gadziridza Firefox
Maitiro 2: Dzima Hardware Kumhanyisa
Maitiro 3: Disable Firefox Extensions
Maitiro 4: Delete Browser Cache uye Cookies
Maitiro 5: Bvumira Autoplay paFirefox
Maitiro 6: Bvumira maKuki, Nhoroondo, uye Pop-ups
Maitiro 7: Refresh Firefox
Panogona kuve nezvikonzero zvakasiyana zvekukanganisa uku kuitike, zvinoti:
Chinyakare vhezheni yeFirefox
Firefox yekuwedzera & nekumhanyisa maficha
Yakaora cache ndangariro & makuki
Akaremara makuki & pop-ups
Pamberi, uchiita chero kumberi kugadzirisa matambudziko, iwe unofanirwa kutanga watanga PC yako uye wotarisa kana Firefox isiri kutamba vhidhiyo nyaya yagadziriswa kana kwete.
1. Enda kune iyo Tanga menyu> Simba> Tangazve sezvakaratidzwa.
Kamwe kana komputa yatangazve, tangisa Firefox uye tarisa kana mavhidhiyo ari kutamba. Ndinovimba, nyaya yacho yagadziriswa. Kana zvisiri, saka ramba uine nzira dziri pazasi.
Kana iwe usati waisa izvo zvazvino uno zve Firefox , zvinogona kutungamira kumatambudziko kana iwe uchiedza kutamba mavhidhiyo pane ino webhu browser. Panogona kunge paine zvipembenene mune yako yazvino vhezheni yeFirefox, iyo inogadziridzwa inogona kugadzirisa. Tevedza nhanho idzi kuti ugadzirise.
1. Kutanga Firefox browser uye wozovhura menyu nekudzvanya iyo chiratidzo chine mitsara mitatu . Sarudza Batsira sezvakaratidzwa pasi apa .
2. Tevere, tinya pa About Firefox zvinotevera.
3. Muhwindo idzva iro rava kuvhura ikozvino, Firefox ichaongorora zvekuvandudzwa. Kana pasina zvigadziriso zviripo, iyo Firefox yave kusvika pari zvino meseji inozoratidzwa sezasi.
4. Kana gadziriso iriko, Firefox inozoisa zvoga.
5. Pakupedzisira, tangazve bhurawuza.
Kana iwe uchakatarisana nedambudziko rakafanana, edza rinotevera gadziriso.
Hardware kumhanyisa ndiyo nzira iyo zvimwe zvikamu zvehurdware zvinopihwa mamwe mabasa ekuvandudza mashandiro echirongwa. Iyo yekumhanyisa yekumisikidza ficha muFirefox inopa nyore uye nekumhanya, asi zvakare inogona kunge iine kukanganisa-kunokanganisa bugs. Naizvozvo, iwe unogona kuyedza kuregedza kumhanyisa kwehardware kuti ugone kugadzirisa mavhidhiyo asiri kurodha Firefox nyaya se:
1. Kutanga Firefox uye vhura menyu sepakutanga. Sarudza Zvirongwa , sezvakaratidzwa mumufananidzo pazasi.
2. Zvadaro, uncheck bhokisi riri pedyo ne Shandisa zvinokurudzirwa mashandiro ekuita pasi pe Kuita Tab.
3. Tevere, uncheck bhokisi riri pedyo ne Shandisa Hardware kumhanyisa kana iripo.
4. Pakupedzisira, tangazve Firefox. Tarisa kana Firefox inogona kutamba mavhidhiyo.
Uyezve Verenga: Maitiro Ekugadzirisa Firefox Nhema Screen Nyaya
Wedzera-ons inobvumidzwa pane yeFirefox browser inogona kunge ichikanganisa mawebhusaiti uye isingabvumidze mavhidhiyo kutamba. Tevedza nhanho dziri pazasi kudzima mawedzero uye gadzirisa Firefox isiri kutamba vhidhiyo nyaya:
1. Kutanga Firefox uye yaro menyu . Pano, tinya Wedzera-ons uye Themes sezvakaratidzwa pasi apa.
2. Tevere, tinya pa Kuwedzeredzwa kubva pane yekuruboshwe pane kuti uone iyo rondedzero yekuwedzera-pane ekuwedzera.
proxy server haina kupindura
3. Dzvanya pane iyo madota matatu pedyo neumwe neumwe wekuwedzera uye osarudza Bvisa . Semuenzaniso, isu tabvisa Enhancer yeYouTube kuwedzerwa mune yakanamatira skrini.
4. Mushure mekubvisa zvisingadiwe zvinowedzera, tangazve bhurawuza uye ongorora kana nyaya yacho yagadziriswa.
Kana Firefox isingatambe vhidhiyo dambudziko rikaramba riripo, unogona kujekesa bhurawuza cache uye makuki zvakare.
Kana mafaera ekuchengetedza uye makuki ebrowser akaora, zvinogona kutungamira kuFirefox kusatamba vhidhiyo kukanganisa. Heano maitiro ekudzima cache uye makuki kubva kuFirefox:
1. Vhura Firefox. Enda kune iyo Side menyu> Zvirongwa sezvawakaita pakutanga .
2. Tevere, tinya pa Kuvanzika uye Kuchengeteka kubva pane yekuruboshwe. Inoratidzwa ne kukiya icon, sezvakaratidzwa mumufananidzo pazasi.
3. Wobva waenda pasi kune iyo Cookies uye Saiti Dhata sarudzo. Dzvanya pa Bvisa Dhata sezvakaratidzwa.
4. Tevere, tarisa mabhokisi ari padivi pezvose, Cookies uye Saiti Dhata uye Cached Webhu Zvemukati muhwindo rinobuda rinotevera.
5. Pakupedzisira, tinya Zvakajeka uye Tangazve dandemutande.
Tarisa uone kana nzira iri pamusoro yakashanda kugadzirisa nyaya ye Firefox isingatambe mavhidhiyo. Kana zvisiri, enda kumhinduro inotevera.
Kana iwe uri kutarisana ne'Twitter mavhidhiyo asiri kutamba paFirefox 'dambudziko, saka zvinogona kudaro nekuti Autoplay haina kubvumidzwa pane yako browser. Heano maitiro ekugadzirisa Firefox isiri kutamba vhidhiyo kukanganisa:
google chrome yakamira kushanda windows 7
1. Shanyira iyo webhusaiti uko mavhidhiyo asiri kutamba achishandisa Firefox. Pano, Twitter inoratidzwa semuenzaniso.
2. Tevere, tinya pane iyo Lock icon kuti uwedzere. Pano, tinya pane iyo divi museve sezvakaratidzwa pasi apa.
3. Wadaro, sarudza Mamwe mashoko sezvakaratidzwa pasi apa.
4. Mu Peji Info menyu, enda kune Zvibvumirano Tab.
5. Pasi pe Autoplay chikamu, uncheck bhokisi riri pedyo ne Shandisa default.
6. Wobva wadzvanya Rega Audio uye Vhidhiyo. Tarisa mufananidzo uri pazasi kuti ujekeswe.
Bvumira Autoplay yeWese Webhusaiti
Iwe unogona zvakare kuona kuti iyo Autoplay ficha inobvumidzwa kune ese mawebhusaiti, nekutadza, seinotevera:
1. Enda kune iyo Side menyu> Zvirongwa> Zvakavanzika uye Chengetedzo sekurairwa mukati Maitiro 4 .
2. Bhura pasi kusvika Zvibvumirano uye tinya Autoplay Zvirongwa , sezvakaratidzwa.
3. Pano, ita shuwa kuti Rega Audio uye Vhidhiyo inogoneswa. Kana zvisiri, sarudza iyo kubva kumenyu inodonha sezvakaratidzwa mumufananidzo pazasi.
4. Pakupedzisira, tangazve bhurawuza. Tarisa kuti ' mavhidhiyo asiri kutamba pa firefox ' nyaya yagadziriswa. Kana zvisiri, verenga pazasi.
Uyezve Verenga: Gadzirisa Server Haina Kuwanikwa Error muFirefox
Mamwe mawebhusaiti anoda makuki uye pop-ups kuti atenderwe kubhurawuza rako kufambisa data uye odhiyo-vhidhiyo zvemukati. Tevedza nhanho dzakanyorwa pano kubvumira makuki, nhoroondo, uye pop-ups paFirefox:
1. Kutanga Firefox browser uye enda ku Side menyu> Zvirongwa > Kuvanzika uye kuchengetedzeka sezvakatsanangurwa kare.
2. Pasi pe Cookies uye Saiti Dhata chikamu, tinya Manage kunze sezvakaratidzwa.
3. Pano, ita shuwa kuti hapana webhusaiti yakawedzerwa kune iyo runyorwa rwezvakasiyana kuvhara makuki.
4. Enda padanho rinotevera usina kusiya peji rino.
1. Pane peji rimwe chete, pfuurira pasi kune iyo Nhoroondo chikamu.
2. Sarudza ku Rangarira Nhoroondo kubva pamenyu inodonhedza.
3. Enda padanho rinotevera usinga bude peji rekumisikidza.
windows 10 kugadzirisa odhiyo matambudziko
1. Dzokera ku Chakavanzika uye Chengetedzo peji ku Zvibvumirano chikamu.
2. Pano, uncheck bhokisi riri pedyo Bvisa mawindow abuda sezvakaratidzwa pasi apa.
Kana matanho ari pamusoro apa aitwa, edza kutamba mavhidhiyo paFirefox.
Kana mavhidhiyo eFirefox asiri kutamba achiramba, enda kunzira dzinobudirira kuti uvandudze Firefox uye tangazve komputa yako.
Paunoshandisa Refresh Firefox sarudzo, bhurawuza rako rinozogadziriswazve, zvingangogadzirisa zvese zvidiki glitches zvauri kusangana nazvo parizvino. Heano maitiro Ekumutsidzira Firefox:
1. Mu Firefox browser, enda ku Side menyu> Rubatsiro, sezvakaratidzwa pasi apa.
2. Tevere, tinya pa Zvimwe Dambudziko rekugadzirisa Ruzivo sezvakaratidzwa pasi apa.
3. Dambudziko rekugadzirisa Ruzivo peji rinoratidzwa pachiratidziri. Pakupedzisira, tinya Zororazve Firefox , sezvakaratidzwa pasi apa.
Gonesa kana Regedza AutoPlay muWindows 10
Gadzirisa Autoplay isiri kushanda muWindows 10
Ungachinja sei password paNetflix
Sei Kuwedzera Widgets Ku Windows 10 Desktop
Tinovimba kuti mutungamiri uyu akabatsira uye iwe wakakwanisa gadzirisa Firefox isingatambe nyaya yemavhidhiyo . Zvakare, tizivise kuti ndeipi nzira yakashanda zvakanakira iwe. Chekupedzisira, kana iwe uine chero mibvunzo kana mazano maererano nechinyorwa chino, inzwa wakasununguka kuvakanda muchikamu chemashoko pazasi.
windows 10 marongero haavhure 2017
system kudzorera haina kupera
dema sikirini pane yekupinda windows 10
mhanyisa chrome browser windows 10
mhanyisa chrome windows 10
windows inogoneswa nedhijitari rezinesi rakabatana neako Microsoft account
haikwanise kugadzirisa screen kupenya windows 10